I-Paxful, Inc. (okubhekiselwa kuyo nangokuthi “Paxful,” “Thina,” “Thina,” noma “kwethu”) ithatha izinyahtelo ukuthuthukisa umkhiqizo wethu nokunikezela ngezixazululo zokuphepha kumakhasimende ethu. Kule Nqubomgomo Ye-Bug Bounty (“Inqubomgomo”), sichaza amakesi asebenzayo wohlelo lwethu lwe-Bug Bounty nokuthi kufanele lusetshenziswe kanjani ngokuhlangene nokusetshenziswa kwewebhusayithi yethu ku-https://paxful.com/, kufaka phakathi, kodwa akukhawulelwe, ku-Paxful Wallet, inkundla yokuhweba ye-Bitcoin, uhlelo lweselula, amakhasi wemidiya yomphakathi, noma ezinye izinto ze-inthanethi (ngokuhlangene, “Iwebhusayithi”), noma uma usebenzisa imikhiqizo, amasevisi, okuqukethwe, izici, ubuchwepheshe, noma imisebenzi esiyinikezelayo (ngokuhlangene, “Amasevisi”). Le nqubomgomo yenzelwe ukukusiza ukuthi uthole ulwazi mayelana nokuthi ungabamba kanjani iqhaza kuhlelo lwe-Bug Bounty, evikela imiphumela yocwaningo esebenzayo, nokuthi iziphi izinzuzo ongazithola. Sicela uqaphele ukuthi iminikelo yethu Yesevisi ingahluka ngesiyingi.
Kuzo zonke izinhloso, inguqulo yolwimi lwe-English yale nqubomgomo ye-bug bounty izoba ngeyoqobo, ithuluzi elibusayo. Esimweni lapho kunokushayisana phakathi kwenguqulo ye-English yale nqubomgomo ye-bug bounty nokunye ukuhumusha kwezinye izilimi, inguqulo yolwimi lwe-English izobusa futhi ilawule.
Yini Uhlelo lwe-Bug Bounty?
Ukuze kuthuthukiswe i-Paxful Namasevisi, Uhlelo lwe-Paxful Bug Bounty lunikezela abasebenzisi bethu ngethuba lokuzuza umklomelo wokukhomba izinkinga zokusebenza.
Ungaxhumana kanjani ngokutholile kohlelo lwakho lwe-Bug Bounty kithi?
Konke ukuxhumana okunjalo kufanele kuqondiswe ku-[email protected] Ekuthumeleni kwakho sicela ucacise incazelo ephelele yengcuphe nenkomba eqinisekisayo ukuthi ingcuphe ikhona (incazelo / izinyathelo zokwehlisa / izithombe-skrini / amavidiyo / imibhalo noma imisebenzi eminye enjalo).
Ukwaphulwa kweminye yale mithetho kungaholela ekungafaneleni i-bounty.
Hlola kuphela ingcuphe ku-akhawunti okungeyakho noma ama-akhawunti owavumile kusuka kusiphathi se-akhawunti ukuze ahlole.
Ungalokothi usebenzise ukuthola idatha yokufaka engcupheni/ye-exfiltrate noma i-pivot kumasistimu ethu. Sebenzisa isiqinisekiso sokuphela ukubonisa inkinga.
Uma ulwazi oluzwelayo olufana nolwazi lomuntu siqu, imininingwane yokungena, njll,. lufinyelelwe njengenxenye yengcuphe, akufanele lulondolozwe, ludluliselwe, lufinyelelwe, noma lucubungulwe ngemuva kokuthola kokuqala.
Abaphenyi bangahle bangakwazi, futhi abagunyaziwe ukuzibandakanya emisebenzini engaphazamisa, ukulimana noma ukulimala ku-Paxful.
Abacwaningi akufanele badalule esidlangalaleni izingcuphe (ukwabelana ngemininingwane noma okunye nomunye umuntu ngaphandle kwesisebenzi esigunyaziwe se-Paxful), noma ukwabelana ngengcuphe nenkampani yangaphandle, ngaphandle kwemvume eshiwo ye-Paxful.
Sizihlaziya kanjani izinkinga ezikhonjiwe ngaphansi Kohlelo lwe-Bug Bounty?
Konke okutholiwe kuyahlaziywa kusetshenziswa indlela yengcuphe.
Ngaphambi kokuqala ukuxoxisana ngeminye imininingwane ephathelene nezinkinga eziqinisekisiwe ozikhombile ngaphansi Kohlelo lwe-Bug Bounty, kufaka phakathi isinxephezelo, njll, kuzodingeka ukuthi ungene nathi Kusivumelwano Sokungadaluli.
Siyikhokhela kanjani imiklomelo Yohlelo lwe-Bug Bounty?
Yonke leyo miklomelo ikhokhelwa i-Paxful. Yonke imiklomelo ingakhokhelwa kuphela uma ingaphikisani nemithetho esebenzayo neyokulawula, kufaka phakathi kodwa kungakhawulelwe ekuvimbeleni kokuhweba nemikhawulo yomnotho.
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuze sihlaziye okutholiwe Kohlelo lwakho lwe-Bug Bounty?
Ngenxa nesimo esihlukayo nesixubile sezinkinga zokusebenza, asiqalisanga imigqa yesikhathi yokuhlaziya okutholiwe ngaphansi Kohlelo lwe-Bug Bounty. Ukuhlaziya kwethu kuqedwa kuphela uma siqinisekise ubukhona noma ubungekho bengcuphe.
Yimaphi amakesi akhishiwe Kuhlelo lwe-Bug Bounty?
Ezinye izingozi zinakwa njengokuthi azikho ohlelweni lwe-Bug Bounty. Lezi zingozi ezingekho ohlelweni zibandakanya, kodwa azikhawulelwe kokulandelayo:
Ubungozi obudinga ubunjiniyela bomphakathi/ubugebengu bokuthola imininingwane;
Izinkinga ezisuselwe ezinganawo amandla abonakalayo;
Izingozi zokuphepha kuzinhlelo zezinkampani zangaphandle nakumawebhusayithi wangaphandle aqiniswe nge-Paxful;
Okuphumayo kweskena noma imibiko eyenziwe iskena;
Izinkinga ezitholakele ngokuhlola okuzenzakalelayo;
Iziphazamisi ezikhululwe ngokomphakathi kusofthiwe le-inthanethi ezinsukwini ezingu-30 zokudalulwa kwazo;
Ukuhlasela okunomuntu phakathi;
Singatha imijovo yekhanda ngaphandle komthelela othile, obonakalayo;
I-Self-XSS, ebandakanya i-payload efakwe ohlaselwe;
Uma ufuna ulwazi olungeziwe mayelana nale Nqubomgomo, ungaxhumana nathi nge-imeyili ku-[email protected].